Reputology: Alert Sisitimu Yekuongorora Kwepamhepo | Martech Zone
Reputology: Alert System yeInternet Ongororo
China, Gumiguru 10, 2013 China, Gumiguru 10, 2013 Douglas Karr
Isu nguva pfupi yapfuura takagovana yedu online ongororo uye zvimwe tekinoroji iri kukanganisa indasitiri yekudyira. Indaneti is iyo goto chishandiso chekusimbisa makambani ebasa, maresitorendi, uye vamwe vatengesi. Kuzivikanwa kuongorora kwekutarisa uye chikuva chikuva. Inotumira maemail ziviso pese pese mumwe munhu paanoongorora bhizinesi rako paYelp, Google+ Yemunharaunda, Tripadvisor nedzimwe nzvimbo dzekuongorora. Nokupindura nekukurumidza, vatengi vedu vanogona kuwana asingafadzi muongorori kuti achinje pfungwa dzavo 70% yenguva.
Reputology Email Alert
Kubva pamaonero eOperation, Reputology inoita kuti zvive nyore kuona zvinhu zvinodzokororwa nekuunganidza uye kuongorora data rako. Iyo inotumira otomatiki vhiki nevhiki / pamwedzi pfupiso mishumo, uye inokupa iwe analytics kuongorora yako yekuongorora mashandiro.
Pindura Nokukurumidza - Tora nguva-inonoka email yambiro. Chinongedzo mune iyo email chinokuratidza iwe uko ongororo yakatanga kuoneka.
Wongorora Nzvimbo Dzakawanda - Nzira dzekuzivisa kune vanhu chaivo & shandisa pfupiso mishumo kuti uone nyaya dzinokanganisa bhizinesi rese.
Teedzera Kwako Kuita - Analytics inoita kuti zvive nyore kunzwisisa kuti kiyi metric iri kufamba sei uye kuenzanisa nzvimbo.
Companies like Chinyorwa chaAngie (mutengi wedu) ane zviziviso uye kunyangwe kuyamura kubatsira makambani ebasa kuziviswa uye kupora kubva kumatambudziko evashandi ... asi mamwe masayiti akavhurika senge anomhanya akawandisa ongororo dzenhema (Verenga: 19 SEO makambani achangobva kubhadhariswa muNew York).
Kusaina kuti uongorore zviyeuchidzo idanho rekutanga kune rako bhizinesi kuongorora uye kupindura kuzvichemo… kunyepedzera kana chaiko!
Tags: Google+ YemunharaundaOngororo dzepamhepomukurumbiraongororo yambiroongorora analyticsReviewsTripAdvisorYelp
Maitiro eTekinoroji Anokanganisa Kwatinodya
Nei Google Kuviga Mazwi Akakosha kune Vashambadzi